Kentucky Medical Marijuana Mitemo - yekurapa mbanje muKentucky
Kentucky Medical Cannabis License
Kentucky Medical Cannabis Mirairo
Kentucky Medical Cannabis License vangave vachiuya kwe2020! Kekutanga kwenguva yekutanga - Kentucky yakavhota uye yakapfuudza yayo Kurapa Cannabis Legalization! Kentucky Medical Cannabis Mitemo inogona kuchinja munguva pfupi inotevera nekuti iyo yenyika paramende yakavhota 65-30 kunyoresa zviri pamutemo zvekurapa cannabis kuvanhu veKentucky. Izvo zvinogona kuve mutemo uye kubvumira varwere kuwana zviri pamutemo zvecannabis mushonga uye kune vamwe vanhu kuti vadzivise kusungwa kusingadikanwe uko vanorambidza masangano vanoramba vachichengetedza.
Dzidza zvese nezvemhando dzekuuya dzekurapa mbanje rezinesi inowanikwa muKentucky neHB 136 Pazasi!
Hapasisina chokwadi parizvino, asi imba yeKentucky yakabvumidza bhiri rekurapa mbanje pamutemo - rakachinja zita raro kuita cannabis pakati pezvimwe zvinhu. Iyo Kentucky Medical Cannabis Mitemo iri kubuda, zvinoreva kuti Kentucky inogona kubatana necannabis zviri pamutemo nyika dzevarwere vayo vekurapa! Munguva pfupi, pamwe unogona kuwana rezinesi rekushandisa rako rekurapa cannabis bhizinesi muKentucky.
Fona nezve yako Kentucky Medical Cannabis License application
Kutsvaga Kentucky Dispensary Ruzivo - Dzvanya Pano.
Kentucky HB 136:Gadzira dzakasiyana siyana Kentucky Medical Cannabis Mitemo to tsanangura mazwi; kudzoreredza chirongwa chekurapa mbanje kubva pane zviripo muKentucky mutemo kuenda kune zvinopesana; kutsvaga iyo Dhipatimendi reOnwa doro uye Cannabis Control kuita uye kugadzirisa chirongwa chekurapa mbanje muKentucky; kugadzira Chikamu cheMishonga Marijuana mukati meDhipatimendi reOnwa doro uye Cannabis Control; kugadza zvirambidzo pakuwanikwa kwembanje dzemishonga nevarwere vanokodzera, kushanyira varwere, uye vanozivikanwa vanovatarisira; kutanga dzimwe dziviriro kune varidzi vemakadhi; kugadzira kuchengetedzwa kwehunyanzvi kwevarapi; kupa ini kwekupa mvumo kwevashandi nemabhodhi ehurumende emvumo yenyika kuburitsa zvitupa zvekushandisa mushonga mbanje; kugadza dziviriro yehunyanzvi kwevamiriri; kurambidza kubatwa uye kushandiswa kwembanje yekurapa mbanje bhazi rechikoro, pazvikonzero zvechero ipi nguva yechikoro chepuraimari kana chikoro chepuraimari, mune yekururamisa nzvimbo, Kentucky Medical Cannabis Legalization, chero chivakwa chehurumende yemubatanidzwa, kana ichiri kushanda mota; kurambidza kuputa mbanje yemishonga; kubvumidza mushandirwi kudzora kwemidzi uye kushandiswa kweanodhaka mbanje nemushandi;
Kentucky Medical Marijuana Mutemo
Mutemo mutsva weKentucky wekurapa mbanje uchada kuti dhipatimendi riite uye rishandise chirongwa chekunyoresa kadhi rechiratidzo;
kugadza zvinodiwa zvemakadhi eRegistry ekuzivikanwa; kugadzira registry chiratidzo chiziviso kadhi; kuti dhipatimendi rishande inorambidza marezenisi system
kugadza zvinodiwa zvekushandisa kadhi yekunyoresa chitupa;
kugadza apo iyo dhipatimendi ingaramba chikumbiro chekodhi rezvinoratidza kadhi; kugadza mamwe mabasa kune varidzi vemakadhi; kugadza apo kadhi yekuzvizivisa kadhi inogona kudzurwa;
kugadza akasiyana-siyana cannabis bhizinesi marezinesi zvikamu;
kugadzira tiering yemabhizimusi e cannabis marezinesi; kuda kuti rumwe ruzivo ruverengerwe muchirongwa checannabis bhizinesi rezenisi;
kugadza apo iyo dhipatimendi inogona kuramba chikumbiro cheKentucky Medical Cannabis Laws cannabis bhizinesi rezinesi;
kurambidza murapi kubva munhengo yebhodhi kana mukuru webhizimisi re cannabis; kurambidza kuyambuka-umene kwemamwe makirasi emabhizimisi e cannabis; uye
kugadza mitemo yekutengesa kwenzvimbo.
RELATED POST: Maitiro Ekuvhura kweCannabis Dispensary
Unoda Kuvhura Bhizinesi ReCannabis
Kentucky May Inyore Marijuana Yekurapa
Kentucky Medical Cannabis Mirairo - Svondo rapfuura, komiti yeKentucky State House yakakwira bhiri rekunyoresa mbanje zviri pamutemo. HB 136, ine rutsigiro rwakakosha muhurumende, uye inomira mukana wakanaka wekuva mutemo. Shanduro ichangobva kubuda kunze kweKomiti yedare yakamira 116 mapeji,. Zvinoshamisa kuti izvi zvipfupi kupfuura Illinois Cannabis Regulation uye Mutero Mutemo, iyo yakauya inosvika mazana matanhatu emapeji.
HB 136 inogadzira chirongwa chekupa marezenisi e "Bhizinesi re cannabis" zvimiro, zvichiteerana nemamiriro azvino enzvimbo dzinoreva "cannabis" panzvimbo ye "mbanje." Bhiri rinosiyira akawanda ezita rezinesi rezinotevera manejimendi ekutonga, zvimwe zvakafanana nemapeji mazana maviri emitemo ye "emergency" mvumo ye cannabis rezinesi muIllinois.
Iyo yakazara marezenisi chirongwa inogadzira mashanu mashanu e cannabis bhizinesi rezenisi pasi peiyo nyowani Kentucky Medical Cannabis Laws, iyo iri pasi pemitero yakasiyana uye zvinodiwa. Pazasi, isu tinonzvera zvimwe zvepamusoro mutsara zvinodikanwa zvakasiyana zvechi cannabis bhizinesi.
KENTUCKY CHIPATARA MARIJUANA MUTEMO TEXT & PDF (HB 136)
Bhiri rinotsanangura "murimi" seinotevera:
“Murimi” zvinoreva chibvumirano pasi pechitsauko ichi chinorima, kukohwa, uye kuendesa zvinyoro zvinyoro kune mumwe murimi, mudhipatimendi, purosesa, mugadziri, kana chengetedzo yekutevera;
Varimi vanosarudzika chaizvo mukukura kwezvirimwa. Chikamu 21 chinogumira mabasa avo seinotevera:
Kuwana, kuva, kudyara, kurima, kusimudza, kukohwa, kucheka, kana kuchengeta mhodzi dze cannabis, mhodzi, zvirimwa, kana mbishi zvidyarwa.
Kununura, kutakura, kutumira, kutumira, kana kutengesa zvisvinu zvirimwa zvinhu kana zvakabatana zvinopihwa kune mamwe mabhizinesi e cannabis ane mvumo mune ino nyika; kana
Kutengesa mbeu dze cannabis kana mbesa kune zvimiro zvakafanana izvo zvinopihwa mvumo yekurima cannabis mudunhu iri kana mune imwe nzvimbo
Varimi ndivo chete mvumo inopihwa mitezo iyo ine “tiers” dzakasiyana, inokanganisa mutengo wedzinesi. Izvi zvakafanana nedzimwe cannabis rezinesi kune dzimwe nyika dzemutemo. Kune varimi veTier I, Tier II, Tier II, uye Tier IV varimi, zvichienderana nehukuru hwezvivakwa zvavo zvekurima:
Ndinoremedza ini murimi- zviuru zviviri nemakumi mashanu emamirita kana mashoma;
Inorema - zviuru gumi zvemamirimita kana mashoma;
Inorema III- 25,000 mativi emamita kana mashoma;
Inorema IV- zviuru makumi mashanu emamita mativi kana mashoma.
Iyo nyika inofanira kubvumidza dai wango 15 marezinesi ekurima mukati megore rimwe mushure mekunge bhiri raita basa.
Chekupedzisira, varimi (pamwe nevagadziri uye processor) vanozviisa pasi zvakakura mutero. Chikamu 33 chinomisikidza mutero we 12% pamaresi akakura yomurimi.
KENTUCKY CANNABIS DZIDZO YOKUFUNDA
Bhiri rinotsanangudza "disensary" seinotevera:
"Dispensary" zvinoreva mubvumo unopihwa rezinesi pasi pechitsauko ichi chinotora, kutora, kuburitsa, kuchinjisa, kutengesa, kutengesa, kupa, kana kutumira mushonga 16 we cannabis kune varidzi vemakadhi;
Kubvumidzwa kwemadhipatimendi kune mamwe mashoma pane kupa marezinesi kune varimi. Bhiri iri inonyatsoda kuti maexpensaries vaviri pamwe nemishonga. Chikamu 22 chinopa:
Vanopa chikamu vachadikanwa kuti vagadzire chibvumirano chakabatana chegumi, sezvakatsanangurwa muChikamu chegumi chemutemo uyu, pamwe nemafemesi akatenderwa 10 neKentucky Board of Pharmacy kuita muchibvumirano chekubatana nevaviri gumi nevaviri.
Iyo nyika inofanira kubvumidza dai wango Makumi maviri neshanu marezenisi mukati megore rebumbiro iri kutanga kushanda. Bhiri iri rinodawo kuti bhajeti rimwe chete ribvumidzwe kune yega ye "matunhu ebudiriro" yakatangwa. Chaizvoizvo, ivo vanofanirwa kuve vakaparadzirwa nenzvimbo kuti vafukidze nyika.
Neraki, makanzuru haasi pasi pemutero wakakura wevarimi, processor, uye vagadziri.
KENTUCKY Cannabis Processor Licence
Bhiri rinotsanangura "processor" seinotevera:
“Processor” zvinoreva chinhu chakabvumidzwa pasi pechitsauko ichi chinowana chinogadzirwa kubva kumurimi kuitira kugadzirira, kucheka, kushambadzira, kusanganisa, kugadzira, kana zvimwe kugadzirisa zvinhu zvakasvibirira zvirimwa, uye zvigadzirwa zvepakeji zvine kana zvakatorwa kubva kune zvakasarikwa zvidyarwa. "inotengeswa kune yemutemo inodzidziswa."
Ma processor anotenderwa kuti aite zvimwe zvinhu zvakarongwa muChikamu 23:
(a) Kuwana kana kutenga zvinyoro zvinyoro zvinyoro kubva kumurimi, processor, kana mugadziri munyika ino;
(b) Kubata, kugadzira, kugadzirira, kugadzira, kushandura, kusanganisa, kugadzirira, kana kurongedza mishonga yekurapa cannabis;
(c) Kuendesa, kutakura, kupa, kana kutengesa mishonga ye cannabis uye zvakabatana zvinopihwa kune mamwe mabhizinesi e cannabis mune ino nyika. kana
(d) Kutengesa cannabis mhodzi kana mbesa kumatunhu akafanana anorayirwa kurima cannabis mudunhu iri kana mune imwe nzvimbo yekutonga.
Bhiri iri rinoda kuti vangangoita vashanu (5) ma processor vanopihwa marezinesi mukati megore rimwe repasira. Ma processor anoiswa pasi pemutero wakafanana negumi nemaviri% pfumisi yemutero sevarimi.
Bhiri iri rinopa rezenisi re “vagadziri”, ivo vari musanganiswa evarimi uye ma processor. Kunyanya, ivo vanotsanangurwa mu Chikamu 1 se:
“Murimi” zvinoreva chibvumirano chakabvumidzwa pasi pechitsauko ichi chinotenderwa kushanda uye kuita zviitiko zvinotenderwa zvese zvechirimi uye 17 processor.
Pasi pechikamu 24, Vagadziri vanobvumidzwa, kuti:
(a) Kuwana, kuva, kudyara, kurima, kusimudza, kucheka, kana kuchengeta mbeu ye cannabis, mbesa, zvirimwa, kana mbishi zvidyarwa;
(c) Kutengesa cannabis mhodzi kana mbesa kumatunhu akafanana anoripirwa kurima cannabis mudunhu iri kana mune imwe nzvimbo yekutonga;
(d) Kuwana kana kutenga zvinyoro zvidyarwa kubva kumurimi mudunhu rino; kana
(e) Kubata, kugadzira, kugadzirira, kugadzira, kushandura, kusanganisa, kugadzirira, kana kurongedza mishonga yekurapa cannabis;
Mukati megore rimwe bhiri richatanga kushanda, iyo nyika inofanira kuburitsa matatu (3) marezenisi ekugadzira. Vagadziri vari zvakare pasi pemutero wevateresi.
KENTUCKY MARIJUANA SAFETY Kutevedzera FACILITY LICENSE
Iyo Cannabis Kuchengetedza Kuteerana Kwekufambiswa Kwemutemo rine marezinesi pasi pemutemo unoita rimwe remabasa maviri:
(a) Kuedza mushonga we cannabis inogadzirwa nebhizinesi re cannabis rakapihwa pasi pechitsauko ichi; kana
(b) Kudzidzisa varidzi vemakadhi uye cannabis bhizinesi vamiririri;
Mabasa anotevera anotenderwa pasi pechikamu 25:
(2) Kudzorera mushonga we cannabis kune varidzi vemakadhi kana ve cannabis mabhizimusi mune ino;
(3) Kutakura mishonga ye cannabis iyo yakagadzirwa nemabhizinesi e cannabis mune ino nyika;
(4) Iko kugadzirwa kana kutengeswa kwezvinhu zvinobvumidzwa zvekudzidzisa zvine chekuita nekushandiswa kweanorapa cannabis;
(7) Kudzidzisa varidzi vemakadhi uye cannabis bhizinesi vamiririri. Kudzidziswa kungasanganisira asi hakufanirwe kungogumira kune:
(a) Kurima kwakachengeteka uye kwakakodzera, kukohwa, kurongedza, kunyorera, uye kugovera mishonga yemuti
(b) Chengetedzo uye maitiro ekuzvidavirira maitiro; uye
(c) Up-to-date kutsvagurudza kwesainzi nekurapa kwakanangana nekushandiswa kwemishonga ye cannabis;
(8) Kugamuchira muripo wezviito zvinobvumirwa pasi pechikamu ichi; uye
(9) Kupinda mune chero chipi chisingaite cannabis zviitiko zvebhizinesi izvo zvisina kurambidzwa kana kubvumidzwa nomutemo wenyika.
Kusiyana nemamwe marezinesi, iyo nyika haina kudikanwa kuti ibudise hushoma huwandu hwecannabis kuchengetedzwa kwekuchengetedza nzvimbo marezenisi.
Kune mamwe mashoma mamwe makuru mubhadharo ayo anozokanganisa zvakanyanya musika wekurapa cannabis muKentucky:
Mugadziri ane marezinesi anogona kungoita imwe (1) yekurima uye imwe (1) yekuvaka nzvimbo, asi ingave munzvimbo dzakasiyana;
Marezenisi ekuvandudza marezinesi anobva pane chikamu chemari inowanikwa:
Kana mareti akadzika ari pasi pemadhora zviuru zviviri zvemadhora, mubhadharo ndeye 2,000,000% yemapositi akakwana + $ 1;
Kana mareti akakura ari pakati pemadhora zviuru zviviri nemadhora zviuru zvisere, mubhadharo ndeye 2,000,000% yemapositi akakwana + $ zviuru zviviri.
Kana mareti akadzika anopfuura madhora zviuru zvisere, mubhadharo ndeye 8,000,000% yemigero yakakwana + madhora zviuru zvina.
Kana mari isingasviki zviuru mazana maviri emadhora zviuru mazana maviri emadhora mugore rapfuura, mubhadharo uyu uri mazana mashanu emadhora pamwe chete ne 2,000,000% yemari yakakwana
Dhipatimendi rinogona kuramba rezinesi chero chikonzero "Mukuita kwemaonero akasununguka", kusanganisira:
Mukuru mukuru akatongerwa mhosva yekusakwana kwakanganisa;
Iyo nzvimbo haina kutevedza zvinorambidzwa munharaunda;
Iyo ficha haigutse kuchengetedzeka, kutarisa, kana marekodhi ekuchengetedza mirau.
TARIRA KWAZVO ZVICHAITIKA MBERI KENTUCKY MARIJUANA LEGALIZATION
Bhiri iri rine chokwadi chekuti richachinja sezvo richishanda nenzira yeganhuriro muFrankfort. Nekudaro, sezvazvakamira zvino, HB 136 inotaridzika yakafanana nemadzishe ekurapa mune dzimwe nyika. Rabha inonyatso rova ​​mugwagwa kana imwe chete hurumende yanyora zvirevo zvehurongwa hwese hwekushandisa. Kentucky inotaridzika yakarongedza kujoinha dzimwe nyika dzakawanda idzo dzakapedzisira dzambundira zvakanakira zvokurapa zve cannabis.
Kentucky Medical Marijuana Mitemo
Kentucky Medical Cannabis Mutemo
Nezvinangwa zveChikamu 1 kusvika makumi matatu emutemo uyu, kunze kwekunge mamiriro ezvinhu achida.
6 (1) "Bona fide mushandi-murwere hukama" zvinoreva kurapa kana kubvunza
7 hukama, panguva iyo iyo chiremba:
8 (a) Anga apedza yekutanga-yemunhu kuongorora uye kuongorora kwe
9 yevarwere nhoroondo yekurapa uye yazvino mamiriro ekurapa;
10 (b) Akarangana nemurwere zvine chekuita nezvechirapa chinogona kuitika uye
11 zvakanakisa zvimiro zvekurapa cannabis;
(C) Akaraira murwere nezve njodzi dzinogona kuitika uye mhedzisiro inobatanidzwa
13 kushandiswa kweanorapa cannabis kusanganisa pamwe nekudyidzana pakati Kentucky Medical Cannabis Pamutemo
14 mishonga yekurapa cannabis uye chero mumwe mushonga kana mushonga uyo murwere ari
15 kutora panguva iyoyo; uye
16 (d) Akaisa tarisiro yaanopa tarisiro yekutevera uye
17 kurapwa kumurwere;
18 (2) “Bhizinesi reCannabis” zvinoreva murimi, mudhiri, purosesa, mugadziri, kana a
19 kuchengetedzwa kwekuchengetedza nzvimbo inopihwa rezinesi pasi pechitsauko ichi;
20 (3) "Anogona bhizinesi mumiriri" zvinoreva mukuru mukuru, nhengo yebhodhi, mushandi,
21 anozvipira, kana mumiririri webhizinesi re cannabis;
22 (4) “Muchengeti weKadhi” zvinoreva:
23 (a) Murwere akanyoreswa anokwanisa, anochengeterwa muchengeti, kana kushanyira anokwanisa
24 murwere anenge anyorera, awana, uye ane chinonyoreswa rejista
Kadhi 25 rekuzivisa rakapihwa nedhipatimendi sezvinodikanwa nechitsauko ichi; kana
(B) Murwere anoshanyira anokwanisa akawana uye anokwanisa kunyoreswa
27 yekuzivisa kadhi, kana yakafanana, yakapihwa zvichienderana nemitemo ye
UNOFFICIAL COPY 20 RS HB 136 / GA Peji 2 ye 118 HB013610.100 - 366 - Kentucky Chiremba Cannabis Pamutemo
1 imwe nyika, dunhu, dunhu, Commonwealth, insular muridzi we
2 United States, kana nyika inozivikanwa neUnited States iyo inobvumira
3 munhu wekushandisa cannabis nekuda kwekurapa zvinangwa mukati mekutonga kwe
5 (5) "Murimi" zvinoreva mubatanidzwa unoripirwa pasi pechitsauko ichi chinorima, kukohwa,
6 uye inoendesa zvinyoro zvinyoro kune mumwe murimi, disensary, processor,
7 muridzi, kana yekutevera kuchengetedza nzvimbo;
8 (6) "Mugadziri weCultivator" zvinoreva mukuru mukuru, nhengo yebhodhi, mushandi,
9 vanozvipira, kana mumiririri wevarimi;
10 (7) "Dhipatimendi" rinoreva Dhipatimendi reHutano hweHuzhinji sezvakatangwa muKRS
12 (8) “Akasarudzirwa muchengeti” zvinoreva munhu akanyoresa zvakadaro ne
13 department sekudikanwa nechitsauko ichi;
14 (9) "Dispensary" zvinoreva mubatanidzwa unoritenderwa pasi pechitsauko ichi chinowana,
15 ane, anonunura, anotamisa, anotakura, anotengesa, anopa, kana anotengesa mushonga
16 cannabis kune varidzi vemakadhi;
17 (10) "Mubatsiri" zvinoreva mukuru mukuru, nhengo yebhodhi, mushandi,
18 anozvipira, kana mumiririri wechipatara;
19 (11) "Kuregera kukanganisa mhosva" zvinoreva:
20 (a) Mhosva yekutsamwisa yaizo muganhura munhu semuiti wechisimba pasi
21 KRS 439.3401; kana
22 (b) Kuputsa mutemo wenyika kana kuti federal kudhibitiwa kwezvinhu zvakatemwa
23 senge munyengeri mudunhu maiva nemhosva, asi:
24 1. Mhosva yakapihwa mutsara, kusanganisira chero nguva yekuedzwa,
25 kusungwa, kana kubudiswa kwakatariswa, kwakapera zvishanu (5) kana zvinopfuura
Makore 26 zvisati zvaitika; kana 27 2. Mhosva yaisanganisira mufambiro iyo Zvikamu 1 kusvika 30 zveizvi
Kentucky Medical Cannabis Mitemo -zve pane inotevera peji
1 Act ingangodaro yakadzivirira kutendiswa, asi maitiro futi
2 dzakaitika kusati kwaitwa kweChikamu 1 kusvika 30 cheMutemo uyu kana
3 vanopomedzerwa nemvumo kunze kweCommonwewe
5 (12) "Yakavharwa, yakakiyiwa nzvimbo" zvinoreva nzvimbo yekukura yemukati yakaita seimba,
6 greenhouse, chivakwa, kana imwe nzvimbo yemukati yakavharirwa iyo inochengeterwa uye
7 inoshanda murimi kana mugadziri uye yakashongedzwa nemakaki uye kumwe kuchengetedzwa
Midziyo 8 inobvumira kuwanikwa chete nevamiriri vevasimudziri kana mugadziri, as
9 inodikanwa nebazi;
10 (13) "Gross risiti" zvinoreva mari yese inogashirwa mumari, makadhi, nzvimbo, kana zvimwe
11 mari yakakosha mune chero chimiro, nebhizinesi re cannabis;
12 (14) “Nzvimbo yekukura” zvinoreva yakafanana nenzvimbo yakavharwa, yakakiyiwa;
13 (15) "Marijuana" zvinoreva zvakafanana nekutsanangurwa muKRS 218A.010;
14 (16) "Mishonga cannabis" zvinoreva mbanje sezvakatsanangurwa muKRS 218A.010 apo
15 yakasimwa, kukohwewa, kuongororwa, kugadzirwa, kutakurwa, kugoverwa, kugoverwa,
16 yakatengeswa, iine, kana yakashandiswa zvinoenderana nezvikamu 1 kusvika makumi matatu zvemutemo uyu. Izwi rekuti
17 "mushonga we cannabis" unosanganisira mishonga yekurapa cannabis uye mbanje chirimwa 18 zvinyorwa;
19 (17) “Medicinal cannabis accessories” zvinoreva chero zvigadzirwa, zvigadzirwa, kana zvinhu zve
20 chero mhando inoshandiswa, yakagadzirirwa kushandiswa, kana yakagadzirwa kuti ishandiswe mukugadzirira,
21 kuchengeta, kushandisa, kana kunwa mushonga we cannabis zvinoenderana neZvikamu 1
22 kusvika makumi matatu emutemo uyu;
23 (18) _ ”Mishonga yechi cannabis chigadzirwa” zvinoreva chero chinhu chakaumbwa, kugadzira, munyu,
24 yakatorwa, musanganiswa, kana kugadzirira kwechimwe chikamu chechiyero Cannabis sp., Mhodzi dzayo
25 kana itsvo; kana chero yakakomberedzwa
26 huwandu hwezvinhu izvi kana uchirimwa, uchikohwa, uchigadzirwa, uchigadzirwa,
27 inotakurirwa, yakaparadzirwa, yakagoverwa, yakatengeswa, yakanga iine, kana yakashandiswa maererano
UNOFFICIAL COPY 20 RS HB 136 / GA peji 4 ye 118 HB013610.100 - Kentucky Medical Cannabis Pamutemo
1 Chikamu 1 kusvika makumi matatu emutemo uyu;
2 (19) “Mudiki” zvinoreva munhu asinganeti makore gumi nemasere (18);
3 (20) "Mufesi" zvinoreva zvimwechete muKRS 315.010;
4 (21) "Mudzidzi" zvinoreva chiremba akapiwa mvumo yekurapa inorapwa
Zvinhu zvishanu pasi peKRS 5, kana muitiro wepamberi wakanyoreswa mukoti uyo ari
6 inobvumidzwa kunyora yakadzora zvinhu pasi peKRS 314.042, ndiani
7 inotenderwa nehurumende rezinesi rezenesi bhodhi kuti ripe zvinyorwa zvakanyoreswa zvichiteedzera
8 Chikamu 5 cheMutemo uyu; 9 (22) "processor" zvinoreva kambani inobvumidzwa pasi pechitsauko ichi chinowana chinogadzirwa
Zvinyorwa gumi kubva kumurimi kuitira kuti agadzire, kutema, kunyengedza, kusanganisa
11 gadzira, kana neimwe nzira shandura iyo yakasvibirira chirimwa zvinyorwa, uye zvigadzirwa zvepakeji
12 ine kana inotorwa kubva kune yakasvibirira chirimwa zvinhu zvekutengesa kune vane rezinesi
13 disensary; 14 (23) “Muongorori mumiriri” zvinoreva mukuru mukuru, nhengo yebhodhi, mushandi,
15 anozvipira, kana mumiririri we processor;
16 (24) “Mugadziri” zvinoreva mubatanidzwa unoritenderwa pasi pechitsauko ichi chinotenderwa
17 inoshanda uye kuita zviitiko zvinotenderwa zvese zveva murimi uye
18 processor; 19 (25) “Mugadziri mumiririri” zvinoreva mukuru mukuru, nhengo yebhodhi, mushandi, anozvipira,
20 kana mumiririri weanogadzira;
21 (26) “Anokwanisa murwere” zvinoreva munhu awana chitupa chakanyorwa kubva
22 murapi waanoshamwaridzana naye chaiwo fide 23;
24 (27) “Kukodzera kurapa” zvinoreva chirwere kana chirwere
25 inowonekera pane rondedzero yemamiriro ekunze akakodzera ayo chiremba anogona
26 ipa murwere chitupa chakanyorwa chakabvumidzwa nebazi
27 zvichiteverwa nezvikamu3 ne28 zvemutemo uyu uye zvinoenderana nekutonga
UNOFFICIAL COPY 20 RS HB 136 / GA Peji 5 pa 118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
1 mirairo yakaparidzirwa ipapo;
2 (28) "Raw zvidyarwa" zvinoreva chikamu chakafukidzwa chechikadzi
3 Vanenge sp. kana chero musanganiswa wemashizha akaunganidzwa, shina, mhodzi, uye maruva e
4 Cannabis sp. chirimwa; 5 (29) "Registry chiratidzo kitsi" zvinoreva gwaro rakaburitswa nebazi iro
6 inozivisa munhu semurwere anokwanisa, anoshanyira murwere anokwanisa, kana akasarudzwa
7 muchengeti; 8 (30) "Akanyoreswa murwere" anoreva murwere anokwanisa akanyorera.
9 yakawanikwa, uye ine inoshanda inozivikanwa rejista chiratidzo kadhi kana zvechisimba
Gumi rezenisi reti rakapihwa nebazi;
11 (31) "Yekutevera kuchengetedza nzvimbo" inoreva mubvumirano inoritenderedzwa pasi pechitsauko icho
12 inopa imwechete (1) yeanotevera masevhisi:
13 (a) Kuedza mushonga we cannabis unogadzirwa nebhizinesi re cannabis rine rezinesi pasi
14 chitsauko ichi; kana 15 (b) Kurovedza varidzi vemakadhi uye cannabis mabhizinesi;
16 (32) "Mumiriri wekuchengetedzwa kwekuchengetedza" zvinoreva mukuru mukuru, nhengo yebhodhi,
17 mushandi, anozvipira, kana mumiririri wenzvimbo yekuchengetedza kuchengetedza;
18 (33) "Mbeu" inoreva cannabis chirimwa chisina maruva uye akareba kupfuura masere
19 (8) inches; 20 (34) "Kuputa" kunoreva kupfungaira kweutsi hwakagadzirwa kubva mukutsva kwemafuta matsva
21 Dyara zviyo kana uchinge waraswa nemoto. 22 (35) "Bhodhi rezinesi renyika" rinoreva chero chimwe chinotevera:
23 (a) Iyo Kentucky Bhodhi rekurapa Licensure; uye 24 (b) Iyo Kentucky Bhodhi reVanamukoti;
25 (36) "Kushandiswa kweanorapa cannabis" kana "kushandisa mishonga ye cannabis" inosanganisira iyo
26 kutora, kutonga, kutora, kutamisa, kutakura, kana kushandisa
27 yemishonga cannabis kana yemishonga cannabis accessories nekadhi kadhi mukati
UNOFFICIAL COPY 20 RS HB 136 / GA Peji 6 pa 118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
1 maererano neZvikamu 1 kusvika ku30 zveMutemo uyu. Mazwi ekuti “kushandiswa kwekurapa
2 cannabis ”uye“ kurapa kwekushandisa cannabis ”hazvisanganise:
3 (a) Kukurwa kwembanje nemurume wemukadhi; kana 4 (b) Iko kushandiswa kana kunwa mbanje nekuputa;
5 (37) “Kushanyira murwere anokwanisa” zvinoreva munhu akanyoresa saizvozvo
6 iyo dhipatimendi sezvinodikanwa pasi pechitsauko chino kana uyo ane unonyoresa rejista
Kadhi rekuzivisa, kana gwaro rakafanana, rakapihwa zvichienderana ne
Mitemo 8 yerumwe nyika, dunhu, dunhu, yakafanana, hupfumi hwe
9 United States, kana nyika inozivikanwa neUnited States inobvumira munhu
10 kushandisa mushonga cannabis mukutonga kwekuburitsa; uye
11 (38) "Certification yakanyorwa" zvinoreva gwaro rakanyorwa uye rakasainwa nachiremba,
12 iyo: 13 (a) Inotaura kuti mune yeanoona nyanzvi murwere angatambira
14 kurapa kana palliative kubatsirwa kubva pakushandisa mishonga yekurapa cannabis;
(B) Inotsanangura mamiriro ekurapa akakodzera kana mamiriro ayo
16 chiremba anotenda kuti murwere anogona kugamuchira kurapwa kana kurwara
17 batsira; uye 18 (c) Inosimbisa kuti murapi ane murapwa chaiye wechiitiko
19 hukama nemurwere